treatment - Synonyms of treatment | Antonyms of treatment | Definition of treatment | Example of treatment | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for treatment
Top 30 analogous words or synonyms for treatment
Jatropha 1.Degumming at /Acid treatment
ကိုယ် နှုတ် စိတ် ယဉ်ကျေးခြင်း ၃၉. မည်သူ့ကိုမဆို (ill treatment, self-conceited, insulting, arrogance, bullying, controversy, confrontation, conflict) ပြုလုပ်ခြင်းများ ရှောင်ကြဉ်ရာ၏။
ဆေးဝါးဗေဒ c. In chronic prostatitis, treatment for 6–12 weeks is indicated.
ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့ အန်းတက်၏ လေ့လာမှုအပေါ်အခြေခံ၍ GATT တွင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုပြုလုပ်ခဲ့သည် များအနက် အဓိက ပြောင်းလဲမှုတစ်ရပ်မှာ ၁၉၆၅ ခုနှစ် Kennedy Round တွင် ဖွံ့ဖြိုးမှု အဆင့်မတူသောနိုင်ငံများအား GATT အနေဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးမှုအဆင့်အလိုက် ခြားနားသော စည်းမျဉ်း များ differential treatment ဖြင့်ဆောင်ရွက်ရန် ပထမဦးဆုံးအနေဖြင့် လက်ခံခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ GATT အဖွဲ့၏ ချမ်းသာနိုင်ငံများအတွက် သီးခြားဦးစားပေးမှုသည်လည်း ဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။